Ọnọdụ okpomọkụ dị elu na ọkọchị na-aghọkarị Ugboro | Network Meteorology
Okpomọkụ dị elu na ọkọchị na-adịkarị
Portillo nke German | | Mgbanwe ihu igwe, Oké ọkọchị
Planetwa anyị na-etinye ọnụ ọgụgụ buru oke oke nke ihe omume ihu igwe. Ugbu a n'oge ọkọchị, site na mmụba nke okpomọkụ na mbelata mmiri ozuzo, oge ọkọchị na-amalite. Oké ọkọchị na-emebi ihe maka mmadụ na anụmanụ na ahịhịa na ụmụ anụmanụ.
Mmiri mmiri na ndụ yana ụkọ mmiri ozuzo na-arịwanye elu na-ebibi nguzozi nke ọtụtụ usoro okike. Oké ọkọchị ndị a na-eme kawanye njọ site na mgbanwe nke mgbanwe ihu igwe ụwa.
1 Oké ọkọchị na okpomọkụ
2 Buo ọdịnihu
3 Mgbalị iji kwụsị mgbanwe ihu igwe ezughị
Oké ọkọchị na okpomọkụ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, edere ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme maka ọkwa dịgasị iche iche nke ụwa n'ihi oke ihu igwe. Oke okpomọkụ, oke mmiri ozuzo, oke ifufe ọsọ, wdg. Ọmụmaatụ, Eprel ochie a bụ nke kacha sie ike na afọ 137. National Oceanic na ikuku Administration (NOAA) nke United States na-egosi na n'April 2016 na 2017 abụọ anomalies kachasị mma nke oke osimiri zuru ụwa ọnụ edebanyela aha kemgbe 1880. Nke a nwere nkọwa ya ma dabere na mmụba na nchikota ikuku gas na ikuku. Na June 14, 2017, edere ikuku CO2 nke ikuku nke 409,58 akụkụ kwa nde (ppm), ihe omume nke na-akwado nrịbawanye nke ikuku gas ma bụrụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ikuku CO2 achọpụtara n'ụwa maka afọ 800.000.
A ghaghi iwere ya dika ihe doro anya na odi mkpa anwuru ahihia nke ikuku mmadu site na ihe mmadu na ihe ha metutara igwe. E nwere ihe ọmụmụ ndị kwuru na okpomoku zuru ụwa ọnụ nke mmadụ mere Ọnọdụ ikuku na-agbanwe. Nke a na - ebute ugboro na etu ike ihu igwe dị egwu na - abawanye. Ọtụtụ ebili mmiri na idei mmiri na Northern Hemisphere na-akpata ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ nke na-akpata mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa.
Iji nwee ike ịkọ nke ọma ihe ga-eme n’ọdịnihu, achọrọ nha na nlele ndị a pụrụ ịtụkwasị obi dị ka o kwere mee. Ọ dị mkpa ịmara, dịka mgbanwe ndị na-agbanwe n'oge, otu ụwa anyị a ga-esi metụta anyị ozugbo na n'ụzọ ọpụpụ. Ọ bara ezigbo uru ịkọ ọdịnihu iji nyochaa oge gara aga. N'ihi ọmụmụ nke mgbanwe ihu igwe n'oge gara aga, enwere ike ịmepụta ụdị iji nyere aka ịkọ ọdịnihu. O doro anya na anyị nwere ike ịma etu ụfọdụ mgbanwe ihu igwe ga-esi gbanwee n'ihi mmụba nke ikuku gas. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịkọ ihe ha ga-eme taa na ihe ị ga-eme iji zere mbibi kasịnụ.
Ọ dịịrị ndị ọkà mmụta sayensị ịmụ ihe kpatara ya, nsonazụ ya na mgbanwe nke ihu igwe n'akụkọ ihe mere eme ụwa na n'ọdịnihu. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'akụkụ nke ha, kwesịrị ige ndị ọkachamara ntị ma dabere na mkpebi sayensị. Ma, e wezụga ịtụle ihe àmà ndị ọkà mmụta sayensị na-egosi, ọ dị mkpa, maka ọdịmma nke mmadụ nile, na a na-aghọta ihe ha na-ekwu n’ụzọ ziri ezi. Agbanyeghị, iwu doro anya nke US na-atụgharị megide ọgụ ahụ iji zere mgbanwe ihu igwe Ọpụpụ Donald Trump na Nkwekọrịta Paris.
Mgbalị iji kwụsị mgbanwe ihu igwe ezughị
Ọ bụ ihe nwute ịhụ etu nsonaazụ mgbanwe ihu igwe na-apụtawanye kwa ụbọchị na ọdachi ndị na-egbu ọtụtụ puku mmadụ kwa afọ mana mbọ a na-agba iji kwụsị ikuku ọkụ ụwa ezughi. Ọ bụ ezie na mba niile nke ụwa rubere isi na Nkwekọrịta Paris na millimeta, nkezi okpomọkụ ga-abawanye karịa ogo 2 nke obodo sayensị gosipụtara dị ka oke.
Ihe ịma aka nke mgbanwe ihu igwe dị mkpa na ngwa ngwa. Ihe ngwọta ndị ahụ dị mgbagwoju anya, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihi na ha chọrọ nkwekọrịta mba dị iche iche, ọrụ ozugbo na ogologo oge, na mmesapụ aka. N'ịbụ onye nwere nsogbu nke ịdị oke otu a na nke ụwa niile dị mkpa, achọrọ nsonye nke mmadụ niile, ọkachasị ndị nwere ikike karịa ma nwee ike itinyekwu aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Okpomọkụ dị elu na ọkọchị na-adịkarị
Oge opupu ihe ubi 2017 abụrụwo ihe kachasị mma na ndekọ ndekọ
Oke Osimiri Mediterenian ga-aghọ ebe mkpofu n’ime otu narị afọ